बिस्वमा आतंक मच्चाउने कोरोना भाइरसका बारेमा आम नागरिकमा जानकारी - ePosttimes
Homeस्वास्थ्यबिस्वमा आतंक मच्चाउने कोरोना भाइरसका बारेमा आम नागरिकमा जानकारी
२२ फाल्गुन २०७६, बिहीबार ०५:३६ स्वास्थ्य 0
काठमाडौँ । अहिले विश्स्वामा मानव जीवनमा प्रतिकुल प्रभाब पार्ने एक सरुवा रोग कोरोना भाइरसका कारण आतंकित भैरहेको छ। चीनको वुहान प्रान्तबाट केहि महिना अगाडिदेखि सुरु भएको कोरोना भाइरस अहिले बिस्वभारी महामारीको रुपमा द्रुत गतिमा फैलिदो अवस्थामा छ। स्वास्थ्य बिज्ञाहरुका अनुसार नेपालमा पनि तत्कालै छिर्न सक्ने प्रबल सम्भावना रहेको बताएका छन।
कोरोना भाइरसका बारेमा आम नागरिकले के गर्ने ? भन्ने बारेमा इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डा. बाबुराम मरासिनीले सुझाएका छन् :
– हात नमिलाउने, त्यसको सट्टा नमस्कार गर्न सकिन्छ । जस्तो– इबोलाबाट जोगिन कुहिना जोड्ने गरेका थिए ।
– एक मिटर जति टाढा बस्ने ।
– ज्वरो–खोकी लागेको मान्छेसँग नसुत्ने ।
– जंगली जनावरलाई नछुने । बिरामी घरपालुवा जनावरको पनि सम्पर्कमा नजाने ।
– सर्जिकल मास्कको प्रयोग गर्ने । कपडाको मास्कले प्रदुषण मात्रै रोक्छ ।
– कोरोनाको बिरामी भेट्न जान लागेको हो भने एन–९५ मास्क नै लगाउनुपर्छ ।
– खोकी, ज्वरो र श्वास फेर्न गाह्रो भएको छ भने चेक गर्न जाने ।
सही जानकारी लिउँ, कुतर्कका पछि नलागौं :
प्रतिरोधात्मक क्षमता राम्रो छ भने त लागि नै हाल्यो भने पनि ठीक हुन्छ । कोरोना संक्रिमितलाई भेट्न जाँदा, उपचार गर्दा वा उसको सम्पर्कमा जाँदा एन–९५ भन्ने मास्क अनिवार्य छ । तर, बाटोमा हिँड्दा, सपिङ मलमा जाँदा सर्जिकल मास्क लगाए पुग्छ । कपडाको मास्कले भने पुग्दैन ।
१०० प्रतिशत प्रत्याभूतिका लागि एन–९५ मास्क चाहिएको हो । एन–९५ लेखिएका दुई–तीन सय रुपैयाँमा पाइने मास्कको कुरा गरेको होइन ।
स्वास्थ्य मन्त्रालये जारी गरेको सूचनामा रुघाखोकीको कुरा उल्लेख छ । तर, ८५ प्रतिशत मान्छेमा जम्मा तीनवटा लक्षण देखिएको छ– ज्वरो, खोकी र श्वास फेर्न गाह्रो भएको । जिउ दुख्ने, घाँटी दुख्ने, होस कम भएजस्तो हुने जस्ता लक्षण ८/१० प्रतिशतमा मात्रै देखिन्छ । रुघाखोकी सामान्य चिसोले पनि हुन्छ भन्ने बिर्सेर फ्लुसँग मात्रै जोड्नु भएन । यो भनेको भात खाने भन्नुको सट्टा चट्नी खाने भनेजस्तो भयो ।
सरकारले जोखिमबारे जानकारी गराउनुपर्छ । नढाँट्ने, सही सूचना दिने गर्नुपर्छ । नेपालमा एकजनामा देखिएर पनि निको भयो नि । तिनको विषयमा चर्चा–परिचर्चा हुनुपर्दथ्यो । उनको अनुभवले अरुको मनोबल बलियो हुन्थ्यो । यो डराउनुपर्ने कुरै होइन ।
ज्वरो आएको, खोकी आएको छ भने शंकास्पद हो । तर, खोकीमात्रै लागेको छ भने होइन । भाइरस सक्रिय हुँदासम्म मान्छेलाई ज्वरो आउँछ । भाइरस मरेपछि ज्वरो हुँदैन । कोरियामा भने एउटा अपवाद देखिएको थियो ।
सम्पर्कहरु ‘ट्रेसिङ’ गर्नुपर्दछ
जतिधेरै मान्छे जम्मा भयो, जोखिम उति नै धेरै हुने भयो । एउटालाई लागेको छ भने अरुलाई सर्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले सभा सम्मेलन जस्ता जमघटका कार्यक्रम नगर्नु बेस । पछि गरे हुने कार्यक्रम छ भने अहिले हतार किन गर्ने ?
मान्छे नबुझिकन विभिन्न तर्क गरिरहेका छन् । तर्क धेरै भएर त्रासको रुप लिएको छ । सही सूचना प्रवाह हुने हो भने कोही पनि अत्तिँदैन । तथ्य जे हो, सरकारले जनतासामु राख्नुपर्छ । तर, चाहिने भन्दा बढी सूचना पनि आवश्यक छैन । जनताले के गर्दा बच्न सकिन्छ त्यसमा ध्यान दिनुपर्दछ ।
236700cookie-checkबिस्वमा आतंक मच्चाउने कोरोना भाइरसका बारेमा आम नागरिकमा जानकारीyes